ဂျိုးလ်အော်စ်တင် | Siyin Chin Baptist Church
Filed Under Joel Osteen
Oral Roberts တက္ကသိုလ်တွင် ခဏတာပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး၊ Lakewood အသင်းတော် ရုပ်သံသာသနာလုပ်ငန်း၏ ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်တွင် မထင်မရှားပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ သူ၏ဖင် ဆုံးသွားသည့် ၁၉၉၉ အထိပင်ဖြစ်သည်။ သူရေးသော After Your Best Life Now (Warner Faith) စာအုပ် နယူးရောက်တိုင်းမ် အရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင်ဖြစ်သည့်နောက်တွင်၊ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀၀ ရရှိသော အသင်းတော်တွင်ထမ်းဆောင်သည့်အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ် အုပ်ရေ သုံးသန်းကျော်ရောင်းရသဖြင့်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်သူ Simon and Schuster ကုပဏီနှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင် ရန် ဒေါ်လာသန်းနှင့် ချီသောစာချုပ်တစ်ခုကိုချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးရိုးဝါဒီယုံကြည်သူများက အပြစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီးသဘောထားပျော့ပြောင်းလွန်းသူဟု ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသလို၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီများ ကလည်း သူ၏ကြွယ်ဝအောင်မြင်ရေးတရားတော်များသည် သခင်ယေရှု၏ ဘ၀နှင့်သွန်သင်ချက်များမှသွေဖြည် သည်ဟုပြောဆိုကြသည်။
တက်စ်ဆက်ပြည်နယ်တွင်ထုတ်ဝေသော ဟူစတန်ခရော်နီကယ် သတင်းစာတွင်ဖော်ပြချက်အရာ အော်စ်တင်သည် Lakewood အသင်းတော်၏ ခြောက်ဦးကော်မီတီဘုတ်အဖွဲ့သာပါဝင်သည့် အခန်းအနားငယ်လေးတစ်ခုဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် လက်တင်မင်္ဂလာဘွဲ့ကို ပေးခဲ့သည်။ သူ၏သာသနာလုပ်ငန်း သည် မည်သည့်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းကြီးတစ်ခုနှင့်မျှဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘဲ သူ၏တွဲဖက်သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ် ဇနီးသည် ဗစ်တိုးရီးယား နှင့်အတူ၊ ဟူစတန်မြို့၏ လူ ၁၆၀၀၀ ဆန့်သော Compaq Center နှင့်လမ်းမများပေါ်တွင် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေးပြုလုပ်သည် မိသားစုပုံစံအသင်းတော်ဖြစ်သည်။
ဟူစ်တန်မြို့တွင်မွေးဖွါးသော အော်စ်တင်သည် ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့တွင် Victoria L. Iloff နှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီး Jonathan နှင့် Alexandra ဟုနာမည်ပေးသော ရင်သွေးငယ်နှစ်ဦးထွန်းကားသည်။ အော်စ်တင်၏မိဘများဖြစ်သော ဂျွန်နှင့် ဒိုးဒီ အော်စ်တင် တို့တွင် ရင်သွေးရတနာ ငါးယောက်ရှိသည့်အနက် အော်စ်တင်သည် တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ပေါလ်၊ လီစာ နှင့်တာမရာတို့သည် အော်စ်တင် ၏အကိုနှင့် အမများဖြစ်ကြပြီး အေပရယ်လ် သည် ညီမဖြစ်သည်။ မိခင်မတူသော အကိုဖြစ်သူ ဂျပ်စ်တင်သည်လည်း နယူးယောက်တွင် အမှုတော်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အော်စ်တင်၏ဖခင်ဖြစ်သာ ဂျွန်အော်စ်တင်သည် Southern Baptist တွင် အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ရာ ၁၉၅၀ နှစ်လွန်များတွင် Charismatic ယုံကြည်သူ တစ်ဦးဖြစ်လာပြီး၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၏ မိခင်များနေ့တွင် Lakewood Church ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အော်စ်တင်၏ဖခင်သည် ထိုအသင်းတော်ကို အသင်းသား ၆၀၀၀ ခန့်ရှိသော ရုပ်မြင်သံကြားသာနာနှင့်၊ ငတ်မွတ်သူများကို အစားအစာ အခမဲ့ဝေငှသော။ မီရှင်လုပ် ငန်းကိုအားစိုက်လုပ်ဆောင်သော အသင်းတော်တပါးအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာအောင်ဦးဆောင်သူ အဖြစ် ဘုရားရှင်၏ အသုံးပြုခြင်းကိုခံရသည်။ အော်စ်တင် ၏ ဂျိုးလ်အော်စ်တင်သာသနာ လုပ်ငန်းသည် ဖခင်၏ သာသနာလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် အမွေခံ လုပ်ကိုင်ရင်း ပိုမို၍ တိုးတက်ကောင်းမွန် ကြီးမားသော အသင်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်လာကာ ယနေ့ အသင်းသား ၃၈၀၀၀ ခန့်ရှိသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအသင်းတော်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံရသည်။
အော်စ်တင်သည် 1963 ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွါးပြီး၊ နောင်တွင်တွဲဖက်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာ မည့် ဗစ်တိုးရီးယား အော်စ်တင်နှင့်လက်ထပ်သည်။ ဖခင်၏သာသနာလုပ်ငန်းတခုဖြစ်သော ရုပ်မြင်သံကြားသာသနာ လုပ်ငန်းတွင် ၁၇ နှစ်ကြာ ပါဝင်ကူညီအမှုတော်ဆောင်ပြီး၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဖခင်၏ သာသနာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ဆက်လက်တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ အော်စ်တင်ဦးဆောင်သော အသင်းတော်သာသနာသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင်ဘုရားရှင်အတွက်အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်နေ သည်။ သူ၏ “Your Best Life Now7Steps to Living at Your Full Potential” ဟုအမည်ပေးထားသော ပထမဆုံးရေးသားသည့် စာအုပ် ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်ထုတ်ဝေသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ဘာဘရာ ဝေါလ်တာ က အော်စ်တင်အား `လူသားများကိုအဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးလူသား ၁၀ ဦး´ စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းသည်။ သမ္မတရွေးကောက်ယှဉ်ပြိုင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သော ဂျွန်မက်ကင်း က အော်စ်တင် ကို ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသူအဖြစ်မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
ယနေ့ အော်စ်တင်နှင့်အသင်းသားများသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးသို့သွားလာပြီး အားကစားရုံးကြီးများတွင် တရားဟောပွဲများကိုလှည့်လှယ်ပြုလုပ်နေကြသည်။ “A Night of Hope” ဟုအမည်ပေးထားသော တရားဟောပြောပွဲတွင် အသင်းတော်၏မြူးဇစ်အဖွဲ့၏ဦးဆောင်မှု၊ အော်စ်တင် ၏မိခင် ဒိုဒီ ၏သက်သေခံချက်၊ အော်စ်တင်၏တရားဒေသနာများဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ထိုတရားဟောပွဲကို ကနေဒါ၊ အင်္ဂလန်၊ မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် နှင့်အစ္စရေးလ် နိုင်ငံများသို့ ခြေဆန့်ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ဖြစ်သော BecomeaBetter You:7Keys to Improving Your Life Every Day ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ရာ၊ အုပ်ရေ လေးသန်းရောင်းချရသော နယူးယောက် တိုင်းမ် ၏အရောင်းရဆုံးစာအုပ်စာရင်းဝင်ဖြစ်လာပြန်သည်။ CNN သတင်းသမား Larry King နှင့်တွေ့ဆုံမေး မြန်းခန်း၌ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများလောက၌ နေထိုင်စဉ်တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏ လူမှုဆက်ဆံရေး အကြောင်း ကိုပိုမိုဦးစားပေးရေးသားထားပါသည်ဟု သူကပြောပါသည်။ သူက ဆက်လက်၍ ဘုရားဖန်ဆင်းသောအသင် လူသားအဖြစ်သို့ ဟူသော သူ၏အခြေခံဒေသနာကို ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အော်စ်တင်၏ ရေပန်းစားလူသိများမှုများကြောင့် အေဘီစီ သတင်းဌါနမှ သူ့ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး လူသား၁၀ ဦး စာရင်းတွင် ဖော်ပြသည့်အပြင် The Church Report အဖွဲ့မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၏ သြဇာအရှိဆုံးခရစ်ယာန် ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို၎င်း ခံခဲ့ရသည်။
တုလိန်းသက္ကသိုလ်မှ လူမှုဗေဒပညာရှင် ရှိန်းလီ နှင့် သမိုင်းပညာရှင် ဖိလစ်စီနီတိုင်းယား တို့ရေးသားသော Holy Mavericks Evangelical Innovators and the Spritual Marketplace စာအုပ်တွင် အော်စ်တင်ကို အတော်ဆုံး ဧ၀ံဂေလိတရားဟောဆရာ ငါးပါးတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
အော်စ်တင်က အပြစ်၏အကြောင်းထက် ဘုရားရှင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းအပေါ်ပို၍ အာရုံစူးစိုက်ပြီး ဒေသနာ ဝေငှသည်ဟုပြောသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ကျမ်းပိုဒ်အမြောက်အများကို သူ၏စာအုပ်များထဲတွင် ကိုးကားဖော်ပြ ခြင်းမရှိပါသနည်းဟူသောမေးခွန်းကို ဖြေကြားရာတွင် သူ့ကိုယ်သူ ဘ၀၏နည်းပြ ပို၍ခံယူသောကြောင့် ဟုပြောသည်။ အော်စ်တင်က သမ္မာကျမ်းစာ၏နည်းလမ်းများကို အရိုးစင်းဆုံးနည်းဖြင့် ရှင်းပြနိုင်ရန် ကြိုးစားလေ့ ရှိကြောင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏တန်ခိုးနှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒ ကိုအလေးထားလေ့ရှိကြောင်းပြောကြားသည်။
အော်စ်တင်ကို အချို့သော ဧ၀ံဂေလိအသိုင်းအ၀ိုင်းများက ဝေဖန်ရှုံ့ချကြသည်။ CNN သတင်းဌါန၏ Larry King Live အစီအစဉ်မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအပြီး၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အောစ်တင်အား “သခင်ယေရှုခရစ်သည်သာလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ရောက်ရန် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်´´ ဟူသောယုံကြည်ခြင်းကို အခိုင်အမာ လက်မခံသူဟု ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းခံရသည်။ ဘုရားရှင်သာလျှင် လူတို့၏နှလုံးသားကို သိကြောင်း ထပ်တလဲလဲ ပြောကြားကာ၊ ယုံကြည်သူတစ်ဦးအနေနှင့် သခင်ယေရှုနှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး ကိုလည်းယုံကြည် ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် အောစ်တင်သည် Larry King Live အစီအစဉ်တွင် ပြန်လည်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ခံရသည်။ ဤတကြိမ်တွင် သူ၏ယခင်ပြောကြားသည်များကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ သို့ရောက်ရန် တစ်ခုတည်းသောလမ်းမှာ ယေရှုခရစ်သာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
အောက်တိုဘ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသီအော်လောဂျီ ပညာရှင် Michael Horton
က အော်စ်တင်၏ “Joel Osteen Answers his Critics” ကိုဝေဖန်ခဲ့သည်။ CBS သတင်းထောက် Byron Pitts နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် Horton က အော်စ်တင်၏တရားဟောနည်းများသည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန် တရားများနှင့် မကိုက်ညီဟုဝေဖန်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် လွှင့်သော Fox News တွင် Chris Wallace က အော်စ်တင်ကို တရားဒေသနာများဝေငှသည့်အခါ သမ္မာကျမ်းစာမှ ကျမ်းပိုဒ်များကို ကိုးကားလေ့မရှိကြောင်း၊ အပြစ်တရားသည် လူသားတို့၏ဘ၀တွင် တစိတ်တဒေသအဖြစ် ပါဝင်ပါတ်သက်နေကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုရန် မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်လေ့ရှိကြောင်း ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ခဲ့သည်။ အော်စ်တင်က ပြန်လည်ချေပပြောဆိုခဲ့သည်မှာ၊ ကျွန်တော်အဲဒီ အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းဟောပြောဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်လူတွေကို သူတို့ရဲ့ နေ့တဓူဝ အသက်တာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင် ကျင့်ကြံရမယ် ဆိုတာတွေကို သင်ပြပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းဘဲ အဲဒါတွေကိုဘဲပို ပြီးအလေးတစိုက်ပြုပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ဒေသနာတွေကို မကြိုက်တဲ့လူ တချို့တလေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ ဟု ပြောဆိုချေပခဲ့သည်။
သူ၏ တရားဒေသနာများသည် တခါတရံ တိုးတက်ကြီးပွါးရေးတရား (prosperity gospel) အတွေးအခေါ် ဆန်သည်။ Prosperity Gospel တိုးတက်ကြီးပွါးရေးဝါဒီတို့၏ယုံကြည်ခြင်းတခုမှာ၊ ကြီးပွါးချမ်းသာအောင်မြင်ခြင်း သည် ဘုရားရှင်ထံမှလာသောကောင်းကြီး ဆုလဒ်ဖြစ်သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။
အော်စ်တင်၏ပြောနေကျ လက်ဆွဲအဆိုများမှာ “သင်ရဲ့ဘ၀ကိုပြောင်းလည်းချင်တယ်ဆိုလျှင်၊ သင့်နှုတ်ထွက် စကားကနေစပြီး ပြောင်းပါ” “သင်ပို၍သိလာလေလေ သင်သည်ပို၍ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်ဘယ် အရာအတွက်မှမတောင်းပန်ဘူး၊ ကျွန်ုပ်ဆီမှာ မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ အောင်မြင်ခြင်းတရားများဆောင်ယူလာပါတယ်” ဟူ၍ဖြစ်တယ်။
သင်တို့ဘုရားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းအကြောင်းကိုပြောကြလေ့ရှိတယ်၊ ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်နာသာပေးခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?
ဘုရားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းဆိုဒါ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်ပေမဲ့ သင့်ဘ၀မှာဘုရားထံမှကြွယ်ဝသောကောင်း ကြီး မင်္ဂလာများကိုရရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ ရုန်းကန်ကြိုးစားခြင်းမလိုအပ်ဘူးလို့ မပြောလိုဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကောင်းသော အရာများအတွက်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါ။ ဘ၀မှာ ကောင်းသောအရာများကို မျှော်လင့်မထားတတ်တဲ့ လူသား မြောက်များစွာရှိတယ်။ သူတို့ ဟာကောင်းသောအရာတစ်ခုမှသူတို့ ဘ၀မှာဖြစ်လာမယ်လို့ မမျှော်လင့်ဘူး၊ အကောင်းမြင်အတွေးတွေမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လူတွေကို အမြဲတမ်းပြောချင်တာကတော့ ဘုရားရဲ့ မျက်နှာသာပေးခြင်းကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်၊ ၀န်ခံတယ်ဆိုရင်၊ ကောင်းသောအရာများဖြစ်လာတာကို မြင်ရတဲ့ အခါ ဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်တတ်တယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေမှာကောင်းကြီးတွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ရရှိခံစား ရမှာဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်က မျက်နှာသာပေးတဲ့သူတွေအပေါ် အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့စေမယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား၊ အရာရာကို အဆုံးပေးပြီး ဆင်းရဲနုံချာစွာနေထိုင်ခြင်းဟာဘုရားရဲ့ အလိုတော်ဖြစ်မယ်လို့ သင်ထင်သလား? ဒါမှမဟုတ် တခြားလူတွေကို ကူညီစောင်မနိုင်ခြင်းလား ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဆိုတာ။ ကျွန်တော် တော့ယုံကြည်ပါတယ်၊ အခြားသောသူများကိုကူညီခြင်းဟာ ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုပါဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဘုရားရှင်က အဲဒီလိုကူညီနိုင်အောင်သင့်ကို ကျေးဇူးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော့ ဖခင်ကြီး အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်၊ ဒီနေ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သူနေထိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားများနဲ့အတူတကွ နေထိုင်ခြင်းဟာ ကျွန်တော့်ဖခင်ကြီးက ကောင်းကြီးလဒ်လာဘ တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့လို့ပါဘဲ။ သူဟာ တတိယကမ္ဘာ ကနိုင်ငံများမျာနေရတာနှစ်သက်တယ်။ ကျွန်တော်သူနဲ့ အတူခရီးသွား လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော့် အသက် ၂၀ ကျော် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တုန်းက ကျွန်တော်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့ အရပ်ဒေသတွေဆီ ကျွန်တော်အဖေနဲ့သွားခဲ့လေ့ရှိတယ်။ ကြွယ်ဝ အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းနဲက တိုင်းတာပြီးပြောလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရှင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ခက်ခဲတဲ့အရာများကိုလည်း ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုတယ်။ သက်ရှိထင်ရှားလူသားထဲမှာ “သင်သည်ဘယ်တော့မှ ခက်ခဲသောအချိန် ကြုံတွေ့မည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်သည်အမြဲတမ်း သင်၏လမ်းခရီးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည် ” ဟုရဲ့ဝန့်စွာပြောဆိုရဲသူရှိမည်မထင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည်ဆိုသည့် အရာများ ကြားထဲမှရုန်းကန်တိုးတက်လာကြသူများချည်းပင် ဖြစ်သည် ဤအခက်အခဲများကို လွယ်လင့်တကူ အပြစ်တင်၍မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအခက်အခဲများကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီး မွန်မြတ်ကောင်းမွန်သော တိုက်ခိုက် ခြင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ကာ အောင်မြင်ခြင်းကိုဆွတ်ခူးကြရန်ဖြစ်တယ်။
ကျွနိုပ်တို့ပြုမိသော အမှားများအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်တတ်ရမည်။ လူတော်တော်များများပြောလေ့ ရှိသည်မှာ “ဘုရားရှင်က ကျွန်တော့်ကိုကောင်းကြီးပေးချင်မယ်လို့ မထင်ဘူး” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော် တို့ဟာ ကိုယ်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ရော၊ သူများအပြစ်ကိုပါခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဘုရားရှင်ရဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်းကို ဘယ်တော့မှမြည်းစမ်းကြည့်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခွင့်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်တည်း သင့်ရဲ့အမူအရာ၊ စိတ်ဓါတ်တွေပြောင်းလည်းသွားပြီး ဘုရားရှင်ထံမှလာတဲ့ တန်ဖိုးရှိခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးတွေကို သင်ရရှိခံစားမှာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ တစုံတယောက်က သင့်ကိုနှိမ့်ချပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ “သူပြောချင်သလိုပြောပါစေ၊ ကျွန်တော့်ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လို ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာသူမကြာခင် သိလာမှာပါ” လို့သင်အေးဆေးငြိမ်သက်စွာပြန်လည်ပြောဆိုချေပနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Thaa Thiangtho »